အာရုံစူးစိုက်မှု Lire Avant de ပိုစတာ Veuillez / အာရုံကိုပို့စ်တင်ခင်မှာ Read ကျေးဇူးပြု.
မေးခွန်း အာရုံစူးစိုက်မှု Lire Avant de ပိုစတာ Veuillez / အာရုံကိုပို့စ်တင်ခင်မှာ Read ကျေးဇူးပြု.
3 နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ -3နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #131 by Gh0stRider203
များအတွက် Rikoooo ဖိုရမ်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် FSX/FSX Edition ကို Steam ။
ဒီဖိုရမ်အင်္ဂလိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သာအင်္ဂလိပ်ကဒီမှာပြောပြီကြောင်း, ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။
ပြင်သစ်တဦးတည်းအဘို့, ဒီမှာသွားပါကျေးဇူးပြုပြီး: www.rikoooo.com/fr/forum/
Bienvenue sur le ဖိုရမ် Rikoooo လောင်း FSX / FSX Edition ကို Steam ။
Notez Que ce ဖိုရမ် est l'anglais, et Que l'anglais est parlé ici .: www.rikoooo.com/fr/forum/
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:3နှစ်ပေါင်း2လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များက Gh0stRider203.